Soo dejisan ooVoo 3.0.2 – Android – Vessoft
Nidaamka hawlgalka: Android, Windows
Bogga rasmiga ah: ooVoo
ooVoo – software ah in ay la xiriiraan dadka isticmaala ee ooVoo adduunka oo dhan. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay wacaan cod ama video in tayo sare leh iyo fariimo ay isdhaafsadaan ah. ooVoo u saamaxaaya in ay meeshaba oolin xiriirada la Facebook, WatsApp, Gmail email iyo buugga telefoonnada. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad si fudud u abaabulo wada hadal koox iyo liiska xiriirka aad ku darto saaxiibo. ooVoo sidoo kale waxa uu interface fudud oo si sahlan loo isticmaali.
Samee calls cod iyo video in tayo sare leh
Syncs xiriir la Facebook, WatsApp, Gmail email iyo buugga telefoonnada
Urur Easy sheekada group
Interface Simple iyo dareen
Soo dejisan ooVoo
Ku dhufo badhanka cagaaran si aad u bilowdo soo dejinta
Ku rakib adigoo isticmaalaya Google Play
Faallo ku saabsan ooVoo
ooVoo Xirfadaha la xiriira
Khadka – aalad isgaarsiinta ka dhexeysa isticmaaleyaasha adduunka oo idil. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isdhaafsato farriimaha qoraalka ama sameysid wicitaan cod iyo muuqaal ah.
Software in la dhaafsado farriimaha qoraalka ah iyo ka dhigi taleefan ama video ah. Codsiga waxaa awood u ku xidhiidhiyaa CHAT group oo u eegto macluumaadka ku saabsan dadka kale ee.
Software A caan ah oo isgaarsiinta codka lacag la’aan ah iyo is-dhaafsiga ee fariimaha qoraalka ah ee u dhexeeya dadka isticmaala ku. Sidoo kale software awood u yeeran ee telefoonada gacanta iyo kan guriga ee canshuuraha wanaagsan.
Tababaraha isgaarsiinta oo lacag la’aan ah kaas oo loogu talagalay by sameeysa ee shabakada bulshada VKontakte. Software wuxuu taageeraa nidaamka lagu kalsoonaan karo sirta ah ee fariimaha ammaan ah.
Browser Fast joogis raaxo ee internet-ka. Software ayaa si toos ah ay habaysaa size la doonayo iyo qaabka qoraalka ah ee bogga internetka ah daaha qalabka.
WhatsApp – mid ka mid ah farriimaha ugu caansan ee ah inuu la xiriiro adeegsadayaasha adduunka oo dhan. Softiweerku wuxuu taageerayaa isweydaarsiga faylasha noocyada kala duwan iyo isgaadhsiinta ee wada sheekaysiga kooxda.
Barnaamijka caanka ah
Beach Buggy Racing – ciyaar nooc ka mid ah noocyada jinsi si loogu tartamo mudnaanta baabuurta kaladuwan iyo darawalada kaladuwan. Ciyaarta ayaa leh qaabab dhowr ah oo maareyn ah oo leh awood ay ku xiraan maamulayaasha ciyaarta.
AccuWeather – waa saxeex cimilo caan ah oo saadaal sax ah leh. Software-ka ayaa awood u siinaya inuu la socdo isbedelada ugu dambeeya ee cimilada iyo saadaasha muddada fog qaab jaantus.
Ciyaaryahanka caanka ah multimedia oo taageero badan oo qaabab. Software playbacks faylasha warbaahinta oo aan khasaaro ah oo tayo leh oo awood u si aad u eegto video qulqulaya ah.